Waa maxay sababta eyda qaar uga sarreeyaan kuwa kale?
Waxaan ku aragnaa eeyo hareeraha ka jira qaarna waxay umuuqdaan inay leeyihiin tamar aan xadidneyn, halka kuwa kale ay gadaal u jiifaan. Waalidiin badan oo xayawaan ah ayaa si deg deg ah ugu yeera eeygooda tamarta sare leh "hyperactive," Maxay eeyaha qaar uga sarreeyaan kuwa kale? Tilmaamaha taranka Adhijirrada Jarmalka, Iskuduwaha Xuduudaha, Soo Celinta Dahabiga ah, Si ...
Waxyaabaha Ay Tahay Inaad Ka Ogaato Cawinada Eygaaga
Waxaa jira qanjirro dhidid ah oo ku jira cowska eeygaaga. Lakabka gudaha ee maqaarka dushiisa eyga waxaa kujira qanjidhada dhididka - oo qaboojinaya eeyga kulul. Iyo sida aadanaha, marka eey kacsan tahay ama walaacsan tahay, ...
Meelaha eygu seexdo
Milkiile kasta oo xayawaan raba ayaa raba inuu wax badan ka ogaado eeyahooda, ee ku saabsan booska eygooda uu jecel yahay. Meelaha eydu ku seexdaan, iyo waqtiga ay ku qaataan hurdada waxay muujin kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan sida ay dareemayaan. Waa kuwan qaar ka mid ah jagooyinka hurdada ee caadiga ah iyo waxa laga yaabo inay ka dhigan yihiin. Dhinaca ...
Eygu miyuu u baahan yahay jaakad xilliga qaboobaha
Jiilaalku dhaqso buu u soo socdaa, Markaan xirano jardiinooyinka iyo dharka xilliyeed ee xilliyeed, waxaan sidoo kale la yaabanahay - eeygu miyuu u baahan yahay jaakad sidoo kale? Sida caadiga ah, eeyaha waaweyn ee leh cufnaanta, jaakadaha cufan ayaa si fiican looga ilaaliyaa qabowga. Noocyada sida Alaskan Malamutes, Newfoundlands, iyo Siberian Huskies, oo leh ...
Maxay eydu u cunaan cawska
Maxay eeyadu u cunaan caws？ Markaad la socoto eeygaaga, mararka qaarkood waxaad arki doontaa eeygaaga oo cunaya caws. In kasta oo aad quudiso eeygaaga cunto nafaqo leh oo ay ka buuxaan wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay u koraan ...
Sida Loo Gooyo Ciddiyaha Bisadahaaga
Sida Loo Gooyo Ciddiyaha Bisadahaaga treatment Daaweynta ciddiyaha ayaa qayb muhiim ah ka ah daryeelka joogtada ah ee bisaddaada. Bisadu waxay u baahan tahay ciddiyaha oo la jarjarey si aysan uga jabin ama u jabin. Waa wax soo saar si loo gooyo dhibcaha fiiqan ee bisadaada n ...